Okuqukethwe - Ngiziqambe kabusha izihloko zezindaba nokuqukethwe ukuze nginikeze izincazelo eziphoqayo, ezihambisana nesikhathi ezibandakanya kakhulu izivakashi. Akuvamile kakhulu ukwehlisa isibalo samagama ekhasini. Imvamisa, ngisebenza ekwandiseni isibalo samagama, ngifaka izigaba ezingeziwe, ngifaka ihluzo, futhi ngifaka ividiyo kokuqukethwe. Ngivivinya futhi ngenzise izincazelo ze-meta zamakhasi ngaso sonke isikhathi ukuzama nokushayela amanani angcono wokuchofoza kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha.
Ukuvumela ukwakheka, ukwakheka, noma okuqukethwe uqobo kumile kuyindlela eqinisekile yomlilo yokulahlekelwa isikhundla sakho njengamasayithi ancintisanayo athuthukisa imizwa yabasebenzisi engcono ngokuqukethwe okubandakanya kakhulu. Ama-algorithm azohlala esiya lapho kubasebenzisi bakho nokuthandwa kwekhasi lakho.
Lokho kusho ukuthi kufanele uqhubeke nokusebenza kokuqukethwe nokwenza kahle ukwakheka! Njengomuntu oqashelwe ukusiza amaklayenti nge-search engine optimization ngaso sonke isikhathi, ngihlala ngigxile kwikhwalithi yokuqukethwe kanye nesipiliyoni somsebenzisi kuma-algorithms.
Uma ungumxhumanisi we-SEO oweluleka amaklayenti akho ukuthi angalokothi abuyekeze okuqukethwe kwawo okukleliswe kakhulu… Ngikholwa ukuthi uyadembesela emisebenzini yakho ukuwasiza aqhube imiphumela yebhizinisi ethuthukisiwe. Yonke inkampani kufanele igcine okuqukethwe ekhasini layo kusesikhathini, kufanelekile, kuphoqelela, futhi kunikeze ngomuzwa womsebenzisi othuthukisiwe.